Falanqaynta Ulefone Armor, wax walba oo wareegaya oo ka yar € 150 | Androidsis
Falanqaynta Ulefone Armor, oo dhan-wareega ah oo ka yar € 150
Miguel Gaton | | Reviews, Ulefone
In kasta oo dadka badankood tixgeliyaan dhinaca bilicsanaanta markay tixgelinayaan mid ama nooc kale oo taleefannada casriga ah ah, taasi maahan kiiska nooca alaabta aan ku soo bandhigno munaasabaddan. Ku Ulefone Armor waa taleefan casri ah oo aad u adkeysi badan kaas oo buuxiya heerka caalamiga ah IP68 iyo maxaa leh qiimo waxyar ka hooseeya € 150 Xaqiiqdii waxaa jira qayb ka mid ah qaybtan isticmaaleyaasha xirfadleyda ah oo maalin kasta baahi badan loo qabo. Aynu si faahfaahsan u aragno dhammaan astaamaha tan taleefanka casriga ah ee waddada laga baxo.
1 Naqshad malahan
2 Astaamaha farsamada ee Ulefone Armor
3 Qiimaha iyo halka laga iibsado Ulefone Armor
5 Faahfaahinta qandaraasyada
6 Sawirka Ulefone Armor Photo
Sida aad u arki karto jaleecada hore, Ulefone Armor ma ahan meel quruxsan, si taxaddar leh loo qaabeeyey, khafiif ah oo iftiin leh. Waa Taleefan casri ah oo gaashaaman si looga hortago biyaha, boodhka iyo naxdinta leh dammaanad buuxda, markaa naqshaddu waa wax si cad u ah aaladdan (iyo guud ahaan baaxadda guud ahaan) meel dhig. Cabirkiisa iyo culeyskiisu waa deeqsi waxayna ku socdaan 148.9 X 75.8 X 12.5 milimitir oo leh 195 garaam oo culeys ah.
Gudaha gudaheeda waxay leedahay batari 3.500 Mah ah oo u oggolaanaya a ismaamul ku filan maalin shaqo oo buuxda si buuxda loo isticmaalayo.
Maaddada ay ku dhex jirto ayaa u adkaysata oo adag, oo ku filan in aan laga helin nooc kasta oo dhicitaan ah, dharbaaxo ama marka ay dhex galaan biyo ama ciid. Shaashadu sidoo kale waxay ku leedahay wejigeeda Corning Gorilla Glass.
Astaamaha farsamada ee Ulefone Armor
Ulefone Armor waa a casriga dhexdhexaadka ah oo sidaas awgeed waa inay bixisaa waxqabad iyo shaqeyn u dhiganta baaxaddaas. Waxay ku timid qalabaysan shaashad 4,7-inji ah iyo HD 720p xallinta. Gudaha waxaan ku leenahay a MediaTek 6753 processor oo leh 8 GHz 1.3-core processor, 3 GB oo RAM ah, 32 GB oo ah kaydinta la ballaarin karo oo leh kaararka microSD, kamarad weyn oo 13 megapixel ah iyo flash flash iyo 5 megapixel flash flash, iyo sidoo kale Android 6.0 Marshmallow operating system. Ma ahan wax xun heerka waxqabadka, in kasta oo aan seegnay inay ku xirnaadaan processor xoogaa casri ah sida MediaTek Helio P10 (MT6755) oo waxtar badan leh.
Heerka isku xirnaanta, waxaa lagu siiyaa LTE, taageero loogu talagalay labada SIM ee firfircoon, WiFi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.0 LE iyo aGPS oo leh taageerada GLONASS. Waxay kaloo leedahay Raadiyaha FM, NFC, iyo badhanka degdegga ah taasi waxay waxtar weyn u yeelan kartaa xirfadle kasta ama cayaartooy xad dhaaf ah haddii ay dhacdo inuu dib u dhac ku yimaado.
Qiimaha iyo halka laga iibsado Ulefone Armor
Sida aan ku sheegnay bilowga falanqaynta, Ulefone Armor waa waxaa lagu heli karaa qiimo aad u soo jiidasho leh oo ah kaliya 148 XNUMX y waad iibsan kartaa adigoo gujinaya halkan. Waa terminaal bixiya a qiimo weyn lacag iyo in loogu talagalay kuwa xirfadlayaasha ah ee ka shaqeeya xaaladaha ba'an ama loogu talagalay ciyaartooyda xiisaha leh ee u baahan taleefan casri ah oo awood u leh inuu iska caabiyo iyadoon waxyeello soo gaarin.
Qiimeynta xiddiga 3
Dib u eegida: Miguel Gaton
Qiimo wanaagsan lacag
Aad u adkeysi badan
Processor-ku waa xoogaa duqoobay
Tayada shaashadda waa la horumarin karaa
Sawirka Ulefone Armor Photo
Muuqaalka soo socda waxaad ku arki kartaa dhammaan faahfaahinta Ulefone Armor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Ulefone » Falanqaynta Ulefone Armor, oo dhan-wareega ah oo ka yar € 150
Samsung Gear S3 hadda wuxuu leeyahay 3 wajiyo cusub oo waardiye ah